ဌေးမင်းခိုင် ● စတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်ထဲက ပါဗလော့ရဲ့ခွေးလေးတွေ – MoeMaKa Burmese News & Media
October 24, 2017 Aung Htet
ငယ်ငယ်တုန်းကများ … အဲလိုစာမျိုး ဖတ်မိရင် သိပ်သဘောကျပေါ့ဗျာ … ။ ငါဟာ ဒုတိယလူမျိုးပဲ ဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက ပေးပေး မပေးပေး ကိုယ်လိုချင်တာ ရအောင်ယူမယ်ပေါ့။ မင်းဘာလဲ၊ ငါဘာလဲပေါ့။ အံမယ် … အတွေးနဲ့တင် မေးရိုးတွေ ဘာတွေတောင် တင်းထောင်လို့။
ဥပမာ စာအုပ်စာပေမရှိတဲ့ နယ်မြေတခုမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့သူတွေအဖို့ စာဖတ်ဝါသနာပါဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းမယ်။ ဒါ ဘဝရဲ့ အကန့်အသတ်ပဲ။ ဘာရောဂါမှန်းသိပေမဲ့ ဆေးမရှိလို့ ကုမသေးနိုင်ဘဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေရတာလည်း ဝန်းကျင်ရဲ့အကန့် အသတ်ပဲ။ နျူကလီးယားဗေဒကို စိတ်ဝင်စားပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ သင်မရတာလည်း စနစ်ရဲ့အကန့်ပဲ … ။ အဲလိုတွေ စဉ်းစားမိလာတယ်။ အဲလိုအချိန်မှာ ပါဗလော့ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်ကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ပါဗလော့ဆိုတာ ရုရှလူမျိုး နိုဘယ်ဆုရှင် Ivan Pavlov ပါ။ စိတ်ပညာ (အထူးသဖြင့် အပြုအမှုဝါဒ Behaviourism)နဲ့ ပတ် သက်ပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခုစမ်းသပ်ချက်ကလည်း အလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။ ခွေးစမ်းသပ်ချက် (Pavlov’s experiments with dogs) လို့ လူသိများပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်ကို တိုတိုပြောရရင် ဒီလိုပါ။
စမ်းသပ်ချက်ကို ကျနော်ဖတ်ပြီး အီလည်လည်ဖြစ်သွားတယ်။ ဝန်းကျင်ရဲ့အကန့်အသတ်ဆိုတာကို လက်ခံထားပေမယ့် ဒီလိုအပြုခံကြီး ဖြစ်နေတာတော့ တယ်မကျေနပ်စရာကိုးဗျ။ ဟာ .. ဘာလဲ … ငါတို့က ပါဗလော့ရဲ့ ခွေးလေးတွေလား … ။ အဲလောက်တောင်ပဲလား .. ။ သူ့ဟာက လက်တွေ့မှာလည်း တော်တော်ငြင်းလို့ ခက်တာကိုး။ ဥပမာ ကလေးတွေကို ဆု ပေးတယ် ဒဏ်ပေးတယ်တာလည်း ဒီသဘောတရားမျိုးပဲ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပြီး ကလေးရဲ့ အပြုအမှုကို ထိန်းချုပ်တာ .. ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ထဲမတော့ တယ်မကျေနပ်ဘူးပေါ့ဗျာ … ။ အဲလိုအချိန်မှာ ဒုတိယစမ်းသပ်ချက်တခုကို ထပ်ဖတ် လိုက်ရပြန်တယ်။
ဒုတိယစမ်းသပ်ချက်က စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ နာမည်ကြီး လူမှုစိတ်ပညာစမ်းသပ်ချက်ပါ။ စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် လူမှုပညာ ရှင် ပါမောက္ခ Philip Zimbardo ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်ပါ။ စတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်စမ်းသပ်ချက် (Stanford Prison Experiment)လို့ လူသိများပါတယ်။ လူမူပညာရှင်တွေ အသိုင်းအ၀န်းမှာတော့ အရမ်းနာမည်ကြီးပြီး အရမ်းငြင်းခုံရတဲ့ စမ်းသပ်ချက်တခု ပေါ့ဗျာ။ ဒီတခါတော့ အစမ်းသပ်ခံတွေက လူတွေ .. ။ သာမန်လူတွေပေါ့ဗျာ။ သာမန်လို တွေးတယ်၊ သာမန်လို ခံစားတတ် တယ်ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့လို သာမန်လူတွေနဲ့ စမ်းသပ်တာပါ။ အစမ်းသပ်ခံတွေကို အုပ်စုနှစ်စု ခွဲလိုက်တယ်။ တစ်စုက အကျဉ်းသား၊ တစ်စုက ထောင်မှူး။ အခြေအနေနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သလဲ။ အဖြေက … မထင်မှတ်နိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။
စမ်းသပ်ချက်က ဘယ်လောက်အောင်မြင်သလဲဆို (ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လောက်ဆိုးသွားသလဲဆို) နှစ်ပတ်လုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စမ်းသပ်ချက်ကို တပတ်ကျော်ကျော်နဲ့ ရပ်ပစ်လိုက်ရတယ်။ နောက် … စမ်းသပ်စဉ်ကာလတွေမှာ သူတို့ တွေ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုတိပ်ကို ပြန်ဖွင့်ပြလိုက်တော့ .. အားလုံး အံ့သြကုန်တယ်။ အထူး သဖြင့် ထောင်မှူးတာဝန် ယူခဲ့ရတဲ့ သူတွေပေါ့။ သူတို့တွေ အဲလောက်တောင် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါလားဆို (ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်) မယုံနိုင်ဘူးတဲ့။ အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားလေလေ၊ ထောင်မှူးလုပ်သူတွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေက မယုံနိုင် လောက်အောင် ပြင်းထန်လာလေလေပဲတဲ့။ နောက် အကျဉ်းသားဖက်မှာလည်း အချင်းချင်း မယုံသင်္ကာဖြစ်တာ၊ ကိုယ်သက် သာဖို့ တဖက်ကို ချောက်တွန်းတာ၊ အခွင့်အရေးရဖို့ ထောင်မှူးတွေနဲ့ ပေါင်းတာမျိုးတွေ လုပ်လာကြတယ်တဲ့။
အိုး … မဟုတ်သေးဘူး .. .. ။ တခုခုတော့ မှားနေပြီ …. ။
ခေတ်စနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အကန့်အသတ်ကို လက်ခံပေမယ့် ခေါင်းလောင်းတီးတိုင်း သရေကျရအောင်၊ စနစ်ရဲ့ဒရမ်ရိုက် ချက်အတိုင်း လိုက်ကရအောင် ငါတို့ဟာ ပါဗလော့ရဲ့ ခွေးလေးတွေလား …. ၊ စတန်းဖို့ဒ်အကျဉ်းထောင်ထဲက အစမ်းသပ်ခံ တွေလား … ။
မဟုတ်ဘူး …. ။
မဟုတ်ရဘူး ….. ။
မဟုတ်သင့်ဘူး …… ။
ကျနော်သေချာစဉ်းစားပြီး သဘောပေါက်သွားတယ်။ မှန်တယ် … ကျနော်တို့အနေနဲ့ ခေတ်စနစ်ဝန်းကျင်ကို ရွေးလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တုံ့ပြန်မှုကိုတော့ ရွေးလို့ ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ action ကိုသာ ရွေးလို့ မရတာပါ။ reaction ကိုတော့ ရွေးလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် reaction က ကိုယ့်လက်ထဲမှာပါ။
ဇတ်အပျက်ကြီးကို ဒီအတိုင်းဆက်ကမလား။ နောက်လူတွေ လက်ထဲကို ဇာတ်ပျက်ကြီးအတိုင်း လွှဲခဲ့မလား .. ဖြစ်တယ် … ။ ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ညွှန်းအသစ်တွေ ဖန်တီးပြီး ပြုပြင်မလား .. ဖြစ်တယ်။
တချို့တွေကလည်း …….. ……. ။
ဟုတ်ကဲ့ …. ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဖို့က ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လာဗျာ မိတ်ဆွေတို့ … ဇာတ်ညွှန်းအသစ်ရေးရအောင် … ။
ဘာဖြစ်လဲဗျာ … ။ အမှောင်တခေတ် အလင်းတခေတ်ပေါ့ … ။
← ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) – လောက၏အဖြေကို သင်္ချာနည်းဖြင့် ရှာခဲ့သော သမိုင်း
ကေဇော်မိုး ● ဆိုက်ကို (၂) →
October 30, 2017 Aung Htet
လှကျော်ဇော – ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖူဆိုယီ (၁၈၉၅ – ၁၉၇၄)
April 10, 2016 Aung Htet